Kedu otu esi ewusi ezi backlinks dị mma?
N'ụbọchị anyị, ndị nwe ụlọ ọrụ a na-amanye ịlụ ọgụ maka ọnọdụ TOP na nsonaazụ ọchụchọ dịka pasent nke asọmpi dị elu. Iji hụ n'etiti ọtụtụ saịtị ndị metụtara niche, ịkwesịrị ịmepụta mgbasa ozi kachasị na-emeri ma mepụta profaịlụ njikọ dị mma. Kemgbe oge nkwalite Google ikpeazụ, ọ ghọrọ obere ihe siri ike ịme njikọ na saịtị gị. N'oge a, Google na-enyocha ịdị mma nke njikọ njikọta, ọ bụ naanị ndị backlinks ndị sitere na isi ebe nrụọrụ weebụ.Ọ bụ ya mere ndị webmasters niile na-atụ anya ga-eji mara ebe ha ga-ewu redlinks iji mezuo arụmọrụ kasị elu. N'isiokwu a, anyị ga-atụle usoro ndị dị irè iji nweta akara azụ azụ dị mma na ihe ndị nwere ike inyere gị aka ibuli ọnụ ọgụgụ nke njikọ ndị abata - remote desktop hosting provider.
Ụzọ iji nweta backlinks dị mma
Backlinks sitere na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama
Nke mbụ na ihe kachasị mkpa ihe na-ekpebi àgwà nke njikọ na-abata bụ ikike nke isi mmalite nke njikọ ndị a na-abịa. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ọ bụla dịkarịa ala ọtụtụ backlinks site na isi ike na ebe nrụọrụ weebụ na ha ga-ewetara gị ihe njikọ njikọ mmiri mgbe ahụ ọtụtụ inbound njikọ si na-ebe nrụọrụ weebụ. Google nwere ike ịkọwa maka àgwà nke ọdịnaya ma ọ bụ njikọ si na saịtị ndị a ma ama. E wezụga nke ahụ, ihe abụọ dị elu nke Google na-ekpebi ọdịdị nke ebe nrụọrụ weebụ - Page Authority na Domain Authority. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ nwere nnukwu PA na DA metric, Google ga-ebuli ya elu na SERP, na-enyekwu ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na njikọ gị na-abanye na ụdị ụdị saịtị a, ha ga-eweta ọtụtụ ihe njikọta njikọta na ibe weebụ gị. Iji chọpụta ma njikọ gị ọ na-etinye na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ị nwere ike imepụta ngwá ọrụ nchịkọta nchịkọta Semalt Web Analyzer.
Backlinks site na peeji PR dị elu
PageRank (PR) na-eje ozi dị ka akara aka maka nyochaa ogo weebụ ọ bụla na engines ọchụchọ ndị Google gosiri. Ntọala ndị dị na TOP nwere ọ dịkarịa ala 9PR ma nwee ọtụtụ àgwà maka ndị ọrụ. Kemgbe afọ 2012 PageRank adịghị enwe mmetụta dịka ọ dị na mbụ, ma ka na-eje ozi dị ka ọkọlọtọ maka ịtụle ụdị isi iyi weebụ na aha ya na ndị ọrụ na ndị mmekọ ụlọ ọrụ. Site na ndabara, backlinks sitere na ebe nrụọrụ 9 ma ọ bụ 10PR dị ka Wikipedia, YouTube, Facebook, na ihe ndị ọzọ, nwere ike iwetara ọtụtụ ihe dị mma njikọta na saịtị gị.Otú ọ dị, ọ naghị adị mfe mgbe niile ịnweta njikọ sitere na ụdị ụdị weebụ. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ usoro aghụghọ ị nwere ike ime (ị nwere ike ịgụ banyere ha na isiokwu anyị bu ụzọ "Otu esi enweta Ndepụta nke Dofollow Backlinks maka Free?"). Ana m akwado ka ị ghara ịla oge ị na - agbalị ịmepụta njikọ na ọhụrụ N / A PR weebụsaịtị ma ọ bụ na ọ bụghị ihe dị mkpa na saịtị gị dị ala PR saịtị. Ị gaghị enweta nsonaazụ ọ bụla dị na ya ma ọbụnakwa bulie ihu agha Google n'ebe ngalaba gị.
Backlinks si na ibe ọdịnaya
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmepụta njikọ gị na weebụsaịtị PR dị elu, ọ dịkarịa mkpa ịmepụta ya na saịtị ndị metụtara niche na ọdịnaya ahụ isiokwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na blog gị gbasara njikarịcha search engine, njikọ gị na blọọgụ ahịa ga-adị mma. Ọbụna ma ọ bụrụ na blog nwere ikike dị n'etiti, a ga-atụle akara azụ gị dị ka ihe dị mkpa na mma. Ọ bụ ya mere tupu ịmepụta mmekọrịta gị na weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị ọzọ, jide n'aka na ọ dịkarịa ala na-ezo aka na ụlọ ọrụ gị.